I-LG Tone yasimahla i-HBS-FN7: Ukucinywa kwengxolo esebenzayo kunye nokunye okuninzi | Iindaba zeGajethi
I-LG Tone yasimahla i-HBS-FN7: Ukucinywa kwengxolo esebenzayo kunye nokunye okuninzi
UMiguel Hernandez | 28/04/2021 10:00 | ngokubanzi, Reviews
Sibuyela kumthwalo kunye nohlalutyo lwemveliso yesandi, ngeli xesha ukusuka kwinkampani yaseMzantsi Korea LG Kutshanje kuphehlelelwe ezona ntloko zibalaseleyo "zoluhlu" kwiimarike, ezo kudala sizivavanya kwaye sizakuthetha nawe ixesha elide.
Fumanisa kuthi i-LG Tone yasimahla ye-HBS-FN7, ii-headphone ezinesibulali zintsholongwane, ukurhoxiswa kwengxolo kunye nokusebenza okumangalisayo. Siza kukuxelela ukuba amava ethu ehlabathi abe yintoni kwezi ntloko zinike okuninzi ukuba zithethe ngazo mva nje kwaye siyintoni isiphumo emva kokudlula kwitafile yethu yohlalutyo.
Ngeli xesha sithetha ngee-headphone eziphezulu kwiphiramidi ye-TWS i-headphone enokurhoxiswa kwengxolo, kokubini ngokusebenza kunye nexabiso. Ziyafana nezixhobo zangaphambili ezivela kwi-LG ngokwayo engekadluli kwitafile yethu yohlalutyo, igqityiwe kwi-FN6 kwaye inexabiso eliqulathe ngaphezulu kunolu hlelo kuba zibekwe kwi-99 euro, ngokungabikho ngokucacileyo kokusebenza ukurhoxiswa kwengxolo. Sithetha ngalo mzuzu malunga I-LG Tone yasimahla i-HBS-FN7 (apha emva kwe-LG FN7).
4 Ukucinywa kwengxolo esebenzayo kunye noluvo lomhleli
I-brand ikhethe uyilo lwe "premium" kunye nokuvelisa. Luvakalelo lokuba sikhawuleze sinayo kunxibelelwano lwethu lokuqala kunye nokupakisha kunye nemveliso ngokubanzi. Sinesakhiwo esimnyama ngokupheleleyo seplastikhi yeyunithi esiyivavanyileyo kunye nenkqubo yeendlebe ngokubhekisele kwisithethi sefowuni, into ebaluleke kakhulu xa sithetha ngezixhobo ezine-ANC (Active Noise Cancellation). Ityala lokutshaja lisetyhula ngokupheleleyo ngombala ofanayo okhankanywe apha ngasentla. Nangona kunjalo, singazithenga zimhlophe ukuba sinqwenela, le mibala mibini iyiphalethi ekhoyo.
Ubukhulu de la ibhokisi: X x 54,5 54,5 27,6 mm
Ubukhulu ye ii-headphone: X x 16,2 32,7 26,8 mm
Ityala lokutshaja linokuchongwa kwe-LED kokusebenza kwee-headphone kwaye kungakhankanywa uphawu lwangaphandle ngaphandle, into enomdla. Yenziwe ngeplastiki ye-matte, ngokungafaniyo nee-headphone ngokwazo, kwaye iyayichasa iminwe kakuhle. Yicompact kwaye ingena ngokugqibeleleyo epokothweni yakho, ine-USB-C ngasemva kwesivalo kunye neqhosha lokuvumelanisa kwicala lasekhohlo.
Ngale ndlela, sinenkcukacha ezimangazayo zokuba ii-headphone zikhupha ukukhanya kwe-UV kwii-headphone ukuphelisa iintsholongwane, inkqubo I-UVnano ye-LG ithembisa ukunciphisa i-bacteria nge-99,9% ngemizuzu nje eli-10 yokuvezwa kwenkqubo yakho. Nangona kunjalo, sikuqinisekisile ukuba oku kukhanya kwe-UV akwenzeki kwimizuzu eli-10 kodwa kwenzeka imizuzwana embalwa.
Sijongene nee-headphone ezineepads ze-silicone ze-hypoallergenic kunye nokuxhathisa kwamanzi ngesiqinisekiso se-IPX4, ngenxa yoko sinokuzisebenzisa imihla ngemihla kuqeqesho okanye kwimvula encinci.
Kwinqanaba lokudityaniswa sineBluetooth 5.0, kunye nethuba lokudibanisa zombini i-Android kunye ne-iOS enkosi kwisicelo seLG Tone Simahla esinokukhutshelwa ngokuskena ikhowudi yeQR efakwe ebhokisini. Kwicandelo lobuchwephesha i-LG ibonelela ngedatha encinci yezobuchwephesha, ke kuya kufuneka sigxile ikakhulu kwiimvakalelo ezishiya kuthi ekusebenziseni kwazo kuvavanyo lwethu. Banemakrofoni ezimbini eziphindiweyo kunye neendlela ezahlukeneyo zokuCima ingxolo (ANC) esinokuthi siyilungelelanise ngokunxibelelana nee-headphone ngokusebenzisa ipaneli yokubamba apho sinokudlala khona umculo okanye siphendule iminxeba.
Icandelo elibalulekileyo lithuba lokuqhubela phambili ukongeza kwi-classic ye-USB-C yokutshaja, i-Qi yokutshaja ngaphandle kwamacingo kuphela ngokubeka kwisiseko sokutshaja ngokwesiko. Ngokubhekisele kwibhetri esinayo i-55 mAh kwifowuni nganye kunye ne-390 mAh. Ifemi ithembisa iiyure ezisi-7 zee-headphone kunye ne-14 ngaphezulu ukuba sibandakanya ibhokisi yokutshaja. Kuvavanyo lwethu sifumene malunga ne-5h 30m yokuzimela ngengxolo yokucinywa kusebenze. Ewe kuyaphawuleka ukukhankanya loo nto USB-C Sinokufumana intlawulo yeyure enye yokusebenzisa malunga nemizuzu emihlanu yentlawulo.
Codec: I-AAC / SBC
Isandi, i-LG iphinda ivule ukuPhathwa kweMiqondiso yeDijithali yeMeridian, Nangona kunjalo, iindlela ezine zokusetyenziswa kwesicelo sakho esivumela ukuba sihlengahlengise ukwenza isandi esikwinqanaba eliphezulu. Siziphawule kakuhle ii-bass kodwa ezingagubungeli amazwi. Asinayo iQualcomm aptX codec, kodwa asibonanga mahluko mkhulu kakhulu ngee-headphone ezenzayo. Amava ethu ayonelisa kwaye ahambelana nexabiso esilihlawule ngalo imveliso, nangona mhlawumbi ingafikeleli kwiimbangi ezinje nge-AirPods Pro (ebiza kakhulu).
Ukucinywa kwengxolo esebenzayo kunye noluvo lomhleli
Ifemi ithembisa ukuba sineemakrofoni ezintathu zokucima ingxolo nangona zibhekisa kwezimbini kwincoko. Kule meko, ii-headphone zisabela kakuhle kwintsebenzo efunekayo yokwenza iifowuni. KUNYEIsandi esixhaswe sisithambiso saso esimaleko-mbini senza amava abe mahle kakhulu xa ucinga ukuba sithetha ngee-headphone ze-TWS ezisezindlebeni. Ke ngokubanzi kubonakala ngathi sifumana imveliso eyijikelezileyo.
Unokufumana i-LG Tone yasimahla ye-FN7 ukusuka kwi-178 kwiwebhusayithi yakho okanye ngexabiso elinokhuphiswano ngakumbi kwi-120 euro kwiAmazon.
Ezi headphone zibonakala ngakumbi kumnyama, kuyilo olunobunkunkqele nolunge ngakumbi, olunokuba ngumbala esiwucebisayo. Siyathemba ukuba uluthandile uhlalutyo lwethu lwe-LG Tone yasimahla ye-FN7 evela kwifemu yaseMzantsi Korea kwaye siyakukhumbuza ukuba ungasishiya nayiphi na imibuzo malunga nayo kwibhokisi yezimvo. Ngendlela efanayo, siyakukhumbuza ukuba ungarhuma kwisitishi sethu seYouTube apho sishiya uninzi lomxholo onomdla ngokuqinisekileyo ongayi kufuna ukuphoswa ngawo.
Ithoni Simahla FN7
Ithunyelwe nge: 28 April 2021
Utshintsho lokugqibela: 27 April 2021
Izinto zepremiyamu kunye noyilo
I-ANC kunye nokuzimela okuhle
Inkqubo eyenziwe lula yesimbo
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » I-LG Tone yasimahla i-HBS-FN7: Ukucinywa kwengxolo esebenzayo kunye nokunye okuninzi
Izinto ezi-5 obungazazi malunga nekhamera yakho yokhuseleko